Xoghayaha guud ee UNWTO Zurab Pololikashvili ayaa booqasho rasmi ah ku tagay Zambia
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Safarka » Xoghayaha guud ee UNWTO Zurab Pololikashvili ayaa booqasho rasmi ah ku tagay Zambia
Wararka Ururada • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Ogeysiisyada Saxaafadda • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Zambia War Deg Deg Ah
Xoghayaha guud ee UNWTO Zurab Pololikashvili ayaa booqasho rasmi ah ku jooga Zambia.
Xoghayaha guud waxaa soo dhaweyntiisa ka helay wasiirka cusub ee loo magacaabay dalxiiska iyo fanka ee Zambia, Mudane Ronald k. Chitotela iyo sidoo kale Mudane Charles Romel Banda (Wasiirkii hore ee Dalxiiska iyo Farshaxanka) oo hada haya jagada Dowlada Hoose.
Wakiilka joogtada ah ee UNWTO, danjire Christine Kaseba ayaa sidoo kale goob joog ka ahayd soo dhaweynta wafdiga.
Maalintii ugu horreysay waxaa ka mid ahaa kulan laba geesood ah oo lala yeeshay Wasiirka cusub ee la magacaabay iyo soo dhaweynta isweydaarsiga ee lala yeeshay daneeyayaasha dalxiiska dalxiiska ee Zambiya oo lagu qabtay Taj Pamodzi Hotel, Lusaka Zambia.
Zambia waxay xubin ka tahay Golaha Fulinta ee UNWTO.